user name များ၊ avator များ၊ Signature များ အသုံးပြုခြင်း — MYSTERY ZILLION
October 2009 edited October 2009 in MZ News
ကျနော် ဒီနေ့ နံနက် 11:49 လောက်မှာ ချက်ရွန်းမှာ ရှိနေတုန်း မထင်မှတ်ထားတဲ့ နစ်နိမ်း နဲ့ (လုံး၀ကို မျှော်လင့်မထားမိတဲ့နစ်ဗျာ) မန်ဘာအသစ်တစ်ယောက် ၀င်လာတာတွေ့လိုက်တယ်....ဇော်ဂျီဖောင့်ကို ဘယ်လိုယူရမလဲလို့မေးတာ...အစကတော့ သူ့နစ်ကို ကျနော် သတိ်မထားမိပါဘူး....ကိုစိုင်းနဲ့ ပြောနေတာ..နောက်မှ သေသေချာချာကြည့်မိတော့ အားလားလား လုံး၀ မဖြစ်သင့်တဲ့ နစ်ဗျာ ပေးထားတဲ့ နစ်က buddha တဲ့ ဖြစ်သင့်ပါသလား....
လူသားတွေမှာ ကိုယ်စီ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာ ဘာသာရေးတွေရှိတတ်ကြပါတယ် (ဘာသာမဲ့လူတွေတော့ နည်းပါးသေးလို့ချွင်းချက်ပေါ့)....ဒီတော့ မိမိယုံကြည်ရာ ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရား ဥလျှောင်ရဲ့ အမည်နာမတော်တွေကို အပျော်သဘော (သို့) အပြောင်သဘောမျိုးနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် လေးစားသမှုနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် သုံးကြလား.....မိမိမြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတဲ့ ဘာသာရေး ဦးလျှောင်ကို မိမိတန်ဖိုးထားယုံကြည့်ကြသလို တစ်ပါသူများရဲ့ ဘာသာတရားတွေကိုလည်း မစော်ကားသင့်ပါဘူး...အဲလိုလည်း ဘယ်သူ၊ ဘယ်ဘာသာတရားကမှ ကြိုက်ကြမှ မဟုတ်ပါဘူး....
နောက်တစ်ခုပြောချင်တာက နစ်နိမ်းဆိုတာ မိမိကို ကိုယ်စားပြုတာပါ....
အဲလိုနေရာမှာ ဘာသားတရားတို့ရဲ့ ဥလျှောင်တွေ့ရဲ့ အမည်နာမတော်တွေကို မသုံးသင့်ပါဘူး...
"ငါကိုးကွယ်တာမှ မဟုတ်တာ" လို့တော့ မပြောကြပါနဲ့...
ကိုယ့်ဘာသာကို ကိုယ်လေးစားမြတ်နိုးသလို သူဘာသာရေးကို သူလည်းမြတ်နိုးလေးစားမှာပါဘဲဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာတဲ့ လူစိတ်ရှိတဲ့ အသိလေး မွေးကြပါ....
MZ ဖိုရမ်ဆိုမှာ လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး နည်းပညာကို စိတ်၀င်စားသူ မည်သူမဆို ၀င်ရောက်လေ့လာ ဆွေးနွေးနေကြတဲ့နေရာမို့ မည်သို့သော ဘာသာရေးတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပုံများ စာများ သင်္ကေတများ ကို အသုံးမပြုကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်...အကယ်၍ ကျနော်တို့က မတွေ့ရှိသေးဘဲ မန်ဘာများမှ တွေ့ရှိနေပါကလည်း ယင်း နစ်နိမ်းကို တိုက်ရိုက်မပြောစေချင်ပါဘူး...ကျနော်တို့ဆီကို PM နဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် ပို့ပြောပါ...ချက်ခြင်း အရေးယူဆောင်ရွက်သွားပါမယ်...ကျန်တဲ့ ကိစ္စများကို ကျနော် ဘာမှ အကျယ်တ၀င့် ၀င်ရောက်မတားမြစ်ပေမဲ့ ဒီကိစ္စကိုတော့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ပါတယ်...
ကျနော့် ဘာသာကို ထိလို့ပြောနေတယ်ထင်မှာစိုးလို့ ထပ်ပြောလိုက်ပါမယ်....
သို့သော် ကျနော် ဘာသာတိုင်းကို လေးစားပါတယ်....
ကျနော်ပြောတာကို MZ မှ အားလုံးသောသူများ (အက်ဒမင်များ၊ မော်ဒရေတာများ၊ အော်ဂနိုင်ဇာများ နှင့် မန်ဘာများအားလုံး) နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်...
ယင်း buddha ဆိုသော user အား ယနေ့ နေ့လည် 11:50 တွင်း ဘန်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျနော့်၏ ပထမဆုံးသော user ဘန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ user များဘန်းခြင်းကို မလုပ်ချင်သော်လည်း မတတ်သာလို့ လုပ်လိုက်ရပါသည်.......
ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်ပါ။ ထောက်ခံပါတယ်။ ကိုယ့်ကဘယ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်သည့်ဖြစ်စေ...၊
တခြားဘာသာတွေကို တော့...နည်းနည်းလေးစားသင့်ပါတယ်။ ဘယ်ဘာသာမဆိုပါ။
ကျွန်တော် ကတော့ ဗုဒဘာသာတော့မဟုတ်ပါ...။ ဒါပေမယ့် ဘယ်ဘာသာကိုမဆိုလေးစားပါတယ်။
အားလုံးဟာ...သူဟာနဲ့သူ စွမ်းပြီးသားတွေပါ။ ကျွန်တော်လိုမျိုးအားလုံးဘာသာတွေကို လေးစားသင့်ပါတယ်....လို့ထင်ပါတယ်။.....:)
အင်း...မှန်ပါတယ်..ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်ပေမယ်.လည်း အခုလို လေးစားတဲ.အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်..
တော်ပါသေးရဲ. တူများနခ်က အဲရိုမဟုတ်လို.
ကိုပု၇င့် လုပ်တာမှန်ပါတယ်ဗျာ။နည်းပညာဆိုဒ်ဆိုပေမဲ့ ခုလိုဘာသာေ၇းစည်းကမ်းမဲ့တာ့မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ဘာသာမတူပေမဲ့ သူများဘာသာကိုလေးစားမှုရှိတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။
ထောက်ခံတယ် ဗျို ့:6::6:
မော်ဒီရေတာ ကိုပရင့် ဧကရာဇ် ခင်ဗျား................
ကျွန်တော့်နာမည်က မည်သည်နှင့် မျှ မသက်ဆိုင်ပါဘူး... ထို့ အတူ အသုံးပြုထားသော အဗာတာ သည်လည်း သက်ဆိုင်မည်ဟု မထင်မိပါ....... သို့သော် ထိုနေရာတွင် ပြောစရာရှိလာသည်မှာ ကျွန်ုပ်၏ ရုပ်ရည် ရူပကာသည် တွမ်ခရုစ်လိုလို ဘရက်ပစ် လိုလို ခန့်ညားနေသောကြောင့် အမျိုးသမီးငယ်များ ကိုးကွယ်ရာ သကဲ့သို့ဖြစ်နေပေသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီး မဘန်းပါနှင့် ခင်ဗျား....